I-AWSOS-P2: Ukuhlola Umthombo Ovulekile omkhulu futhi okhulayo we-AWS - Ingxenye 2 | Kusuka kuLinux
Kulokhu ingxenye yesibili kusukela ochungechungeni lwezihloko ezikwi- «I-Amazon Web Services (AWS) Umthombo Ovulekile » Sizoqhubeka nokuhlola kwethu ikhathalogu enkulu futhi ekhulayo ye vula izinhlelo zokusebenza ithuthukiswe yi Ezobuchwepheshe Giant de «Ama-Amazon ».
1 I-AWSOS-P2: Umthombo Ovulekile we-Amazon Web Services (AWS) - Ingxenye 2
I-AWSOS-P2: Umthombo Ovulekile we-Amazon Web Services (AWS) - Ingxenye 2
"Indawo eyodwa yokwenza ukwenziwa kwesheduli yomuntu wesithathu nokuhlanganiswa ku-ECS, ngenkathi kusetshenziswa i-Amazon ECS ukuphatha ngokuphelele nokukala amaqoqo akho."
“Iqoqo lamaphrojekthi womthombo ovulekile wokuphathwa kwamakhonteyina kanye ne-orchestration ku-Amazon ECS. Lokhu kukuvumela ukuthi unikeze ukulawula okwengeziwe kokuthi izinhlelo zakho zokusebenza zisebenza kanjani ezitsheni ezihlelwe ku-Amazon ECS. Lawa mathuluzi angaba kusuka ezinhlakeni zesheduli ezikusiza ukuthi udale kalula amathuluzi wangokwezifiso ngaphezulu kwe-Amazon ECS, ukuyala amathuluzi olayini (i-CLI) ahlinzeka ngamathuluzi wokuthuthukisa wendawo we-Amazon ECS. "
Note: Okwalabo abangenasiqiniseko sokuthi kuyini I-Amazon ECS, le yisevisi yokuphathwa kweziqukathi zokuphaka nokukala iziqukathi zeDocker ekukhiqizeni.
Ekugcineni, kusuka ku- isiza esisemthethweni ku-GitHub Imininingwane elandelayo kufanele ukugqanyiswa:
"Abathuthukisi bemithombo evulekile balungiselelwe ukusebenzisa izinhlelo ku-Amazon ECS banikela ukulawula okukhulu ekutheni izinhlelo zisebenza kanjani kumaqoqo ezinsizakusebenza, ziqhutshwe, futhi zikalwe ekukhiqizeni, okukuvumela ukuthi usebenzise amandla amakhulu okuhlanganisa."
Note: Imininingwane eminingi mayelana Blox ingatholakala kufayela le- I-Amazon Blog esemthethweni, uma kwenzeka ufuna ukujulisa imininingwane ngentuthuko eshiwo.
"Kungukuqaliswa kwe-C99 kwamaphrothokholi we-TLS / SSL aklanyelwe ukuthi abe lula, amancane, asheshayo futhi kube nokuphepha njengento eza kuqala."
“Ishicilelwe futhi inikwe ilayisense ngaphansi kwe-Apache License 2.0. Futhi phakathi kwezici zayo ezivelele kakhulu ukusetshenziswa kwe-SSLv3, TLS1.0, TLS1.1 ne-TLS1.2. Ukubethela, ama-AES 128 no-256 bits asekelwa, kumodi ye-CBC ne-GCM, ChaCha20, 3DES ne-RC4. Ngokufihla phambili isekela i-DHE ne-ECDHE. Futhi isekela i-TLS Server Name Indicator (SNI), Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) kanye ne-Online Certificate Status Protocol (OCSP) extensions. Ngenkathi, i-SSLv3, i-RC4, i-3DES ne-DHE ikhutshazwe ngokuzenzakalela, ngenxa yezizathu zokuphepha. "
Note: Imininingwane eminingi mayelana I-S2N ingatholakala kufayela le- I-Amazon Blog esemthethweni, uma kwenzeka ufuna ukujulisa imininingwane ngentuthuko eshiwo.
"Yi-Software Development Kit (SDK) eyenziwe yi-Amazon Web Services (AWS) yePython, evumela abathuthukisi bePython ukuthi babhale isoftware esebenzisa izinsiza ezifana ne-Amazon S3 ne-Amazon EC2."
“Inemibhalo eminingi, yakamuva futhi evuselelwe, efaka nohlu lwemisebenzi esekelwayo. Okwamanje, iBoto 3 ifuna inguqulo yayo ezinzile engu-0.0.14 yangomhla ka-04/15, okusitshela ukuthi yintuthuko yokusebenza engadingi ukuvuselelwa kuze kube namuhla. "
"IBoto3 yenza kube lula ukuhlanganisa uhlelo lwakho lokusebenza lwePython, umtapo wezincwadi, noma umbhalo nezinsizakalo ze-AWS, kufaka phakathi i-Amazon S3, i-Amazon EC2, i-Amazon DynamoDB, nokuningi."
Note: Imininingwane eminingi mayelana I-Bot nabanye Amathuluzi Wokuthuthukisa Nokuphatha Izicelo ku-AWS ingatholakala kufayela le- Isigaba samathuluzi sokwakha ku-AWS, ngolimi lweSpanishi, uma kwenzeka ufuna ukujulisa imininingwane mayelana nentuthuko eshiwo noma okunye okufanayo.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" kulokhu kuhlolwa kwesibili kwe «AWS Open Source (AWSOS)», inikeza izinhlobonhlobo zezicelo ezivulekile nezinhlobonhlobo ezivulekile ezakhiwe yi-Technological Giant ye «Amazon»; futhi inentshisekelo nokusetshenziswa okukhulu, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-AWSOS-P2: Ukuhlola Umthombo Ovulekile omkhulu futhi okhulayo we-AWS - Ingxenye 2
I-Sigstore, insiza yamahhala yokuqinisekisa umsuka nokuba yiqiniso kwesoftware